Iindaba-ezikhuthaziweyo zokukhuthaza ukunyusa ukuthengiswa kweemoto ukuze kucinywe ifuthe le-COVID-19's kwintengiso yemoto yasekuhlaleni.
IShanghai (iGasgoo) -I-Yiwu, eyamkelwe njengeyona marike inkulu yorhwebo lwehlabathi, isungule inkuthazo yokuphakamisa ukuthengiswa kweemoto ukuze icime ifuthe le-COVID-19 kwintengiso yemoto yasekuhlaleni.
Okubiza kakhulu isithuthi kufanelekile, kokukhona uya kufumana imali engaphezulu umthengi aya kuyifumana. Abathengi abathenga izithuthi ezinamaxabiso angaphantsi kwe-RMB10,000 (kubandakanya ne-VAT) baya kunikwa inkxaso-mali ye-RMB3,000 ngemoto nganye. Inkxaso-mali elingana ne-RMB5,000 isebenza kwimoto enexabiso nge-RMB100,000 okanye phakathi kwe-RMB100,000 kunye ne-300,000. Ngaphaya koko, inkuthazo yeyunithi iya kuphindaphindwa kwi-RMB10,000 yeemveliso ezinamaxabiso ahlala kwi-RMB300,000 okanye phakathi kwe-RMB300,000 kunye ne-500,000, nakwi-RMB20,000 yexabiso labo kwixabiso elingaphezulu okanye elingaphezulu kwe-RMB500,000.
Urhulumente uzakukhupha uluhlu olumhlophe lweenkampani zalapha ezithengisa iimoto. Ixesha lokusebenza komgaqo-nkqubo liya kuhlala ukusukela ekukhutshweni koluhlu lwabamhlophe ukuya kuJuni 30, 2020.
Umntu ngamnye abathengi okanye iinkampani ezithenga izithuthi ezitsha kubathengisi kolu luhlu lukhankanywe ngentla kwaye bahlawula irhafu yokuthenga iimoto e-Yiwu banokufumana amanqaku enkxaso-mali emva kokuba izicelo zabo zivunyiwe ngabasemagunyeni abafanelekileyo.
Ngaphandle kwedatha yokuphelelwa lixesha, urhulumente ubeka umda ngenani lezithuthi ezichaphazelekayo. Kuza kuphehlelelwa isabelo seeyunithi ezingama-10,000 ekuqaleni ukuze abathengi bathenge iimoto ngokukhawuleza.
I-China auto yokuthengisa igqibe i-4.4% ngonyaka ukuya kwi-2.07 yezigidi zeeyunithi ngo-Epreli, kodwa ukuthengisa kwe-PV kusancipha nge-2.6%, ngokwe-China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Inokubonisa ukuba iimfuno zokusetyenziswa kweemoto zabucala kufuneka zenziwe ngakumbi kwaye zonyuswe.
Ukuvuselela ukuthengisa ngokuzenzekelayo kuthathwe nzima kukusasazeka kwe-coronavirus, uninzi lwezixeko e-China zikhuphe amanyathelo ahlukeneyo, phakathi kokubonelela ngenkxaso-mali yeyona yamkelweyo. I-Yiwu ayisiyo eyokuqala, kwaye ngokuqinisekileyo ayizukuba yeyokugqibela.